Nikela okuncane njalo lapho ubungaza
Nikela ukusiza abantu abathintwe yizinhlekelele, imibango, noma ukugula okubucayi.
noma unikele ngendawo yakho
"Ngizokhumbula yonke imininingwane yaloluhambo ngoba ngiluthande kakhulu."
“Ngeke ngasho ukuthi ikhaya bengilibona ngale ndlela ngaphambi komlilo njengoba sengilibona kanjalo manje. Ikhaya kimi, yilapho umndeni wakho ukhona. Ungenza ikhaya noma kuphi. ”
Isivakashi seZindlu Zezinhlekelele
“Lolu hlelo luvumela umndeni ukuthi ubheke inhlalakahle yomuntu wabo abamthandayo kunokuba ukhathazeke ngokuthi ngiyikhokhela kanjani indawo yokuhlala? Ngingasondelana kanjani nabo?”
Indlela iminikelo esebenza ngayo
Khetha onganikela ngakho
Sitshele ukuthi ufuna kudonswe inani elingakanani ngokuzenzakalelayo emalini ekhokhwayo ngayinye.
U-100% uya ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo
Basebenzisa izimali ukusiza abantu abaswele bathole izindawo zokuhlala zesikhashana.
Thola izibuyekezo njalo zendlela umnikelo wakho owenze umehluko ngayo.
Iminikelo yakho isiza abantu bathole indawo yokuhlala lapho beyidinga kakhulu
Abantu abasiziwe kuze kube manje
NgeZindlu Zezinhlekelele, ababungazi baye banikela ngamakhaya wabo mahhala kwabathuthwayo, izisebenzi ezinikeza usizo ngezikhathi zenhlekelele, ababaleki, kanye nabanye abaningi. Kodwa akuwona wonke umuntu ongabungaza mahhala.
Okwenza ababungazi banikele
"Nginomshana wesilisa engimthandayo onesimo esingajwayelekile sezokwelapha futhi ngiyazi ukuthi kube yisibusiso esingakanani emndenini wakhe lapho kumele bahambe ekhaya bayovakashela enye indawo bafike bahlale ngaphandle kokukhokha."
U-Annette, umbungazi e-New Castle, CO
“Ngisebenza emtholampilo yomdlavuza futhi ngiyasiqonda isidingo esiphuthumayo sokuthola indlu ngokuphuthumayo nomusa ovela ebantwini ongabazi!”
U-Aurora, umbungazi e-Santa Clara, CA
"Ngibona lokhu kuyindlela yokupha abanye abantu izipho eziningi kanye nokweseka esakuthola emphakathini wethu ngesikhathi umyeni wami elulama kumdlavuza weSigaba 4."
U-Tess, umbungazi e-Port Townsend, WA
"Ngiyazi ukuthi kunjani ukweswela indawo yokufihla ikhanda, yikho manje ngifuna ukusiza labo abasezimweni ezifana nalezi"
U-Adam, umbungazi Ezintabeni zase-North Carolina
“Nganginesifo i-leukemia kusukela ngineminyaka engu-12 kuya kwengu-28, futhi kwadingeka ngihambe amakhilomitha amaningi ukusuka ekhaya ngenhloso yokuthola ukwelashwa. Kwakuyisikhathi esinzima kubazali bami futhi bengenamali. Ngiyajabula ukuthola ithuba lokusiza omunye umuntu.”
U-Judy, umbungazi wase-Santa Maria, CA
“Sengibone ubunzima obuningi kakhulu kanye nezinhlekelele zemvelo. Nansi indlela enhle yokusiza omunye umuntu.”
U-Gary, umbungazi e-Talent, NOMA
Yizwa okushiwo abantu abaye badinga indawo yokuhlala yesikhashana.
"Leli ithuba elihle kakhulu lokwenza umehluko kumuntu ongadinga isikhathi sokucabanga noma indawo yokucabangisisa ngokulandelayo."
ULaura, isivakashi e-Mexico City · Funda ngosizo ngesikhathi sezinhlekelele
"Sipheka ndawonye futhi sidle ndawonye. Ngingasho ukuthi kunjengomndeni wami. "
UFode, isivakashi eRoma · Funda ngezindawo zokuhlala zababaleki
"Kwangenza ngazizwa ngisekhaya ukuba sekhaya lomunye umuntu."
U-Ashlee, isivakashi sase Salt Lake City · Funda ngezivakashi zezokwelapha
Kulonyaka kuphela, i-Airbnb itshale imali engaphezu kwezigidi ezingama-$20 ukusiza abantu abadinga indawo yokuhlala, kuhlanganise nemali yezibonelelo eya ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo njenge-Make-A-Wish® Foundation kanye ne-International Rescue Committee.
Sineqembu lochwepheshe kokubili ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo nakwezobuchwepheshe abasebenzela ukukhulisa inkundla Yezindlu Zenhlekelele. I-Airbnb ihlangabezana nazo zonke izindleko ezihilelekile ukuze lokho kwenzeke.
Asithathi ingxenye yemali
Iminikelo yakho iya ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo ezisiza abantu bathole indawo yokuhlala. Sihlangabezana nezindleko zonke ze-Airbnb zokuphrosesa, ngakho-ke konke onikela ngakho kusetshenziselwa ukusiza othile oswele.
Hlangana nesisebenzisana nabo
Sisebenza kanye nezinye zezinhlangano ezingenzi inzuzo ezihamba phambili emhlabeni ezisiza abantu abaswele bathole indawo yokuhlala yesikhashana.
Inhlangano engenzi nzuzo esiza ababaleki ukuba bavuselele izimpilo zabo ngokubeseka, ngokubahlinzeka ngezindlu nangemfundo.
Umphakathi Wokuxhasa Umdlavuza
Inethiwekhi yomhlaba wonke yenhlangano engenzi-nzuzo yenzelwe ukunikezela ngolwazi, izinsiza, kanye nomphakathi ezigidini zabantu abathintekile ngenxa yomdlavuza.
Inhlangano yamazwe ngamazwe esiza mayelana nezinhlekelele ebhekelela izidingo zemiphakathi ekhutshazwe yizinhlekelele zemvelo.
Iqembu lezosizo lomhlaba wonke elisebenzela ukusindisa izimpilo ngesikhathi senhlekelele yemvelo kanye nezinkinga ukusiza imiphakathi ukuthi ilulame ngokushesha futhi ibe namandla.
Awukwazi ukuthola umbuzo wakho lapha? Vakashela Isikhungo Sosizo
Ingabe kudonswa intela eminikelweni?
Ababungazi abakhokha intela e-United States, iminikelo ikhokhelwa intela ngezinga elivunyelwe ngaphansi komthetho wentela wase-United States njengomnikelo weSikhwama seZindlu Zezinhlekelele, esitholakala ku-PayPal Giving Fund. I-Paypal Giving Fund inhlangano engakhokhiswa intela yase-US (a 501 (c)(3)). Ababungazi abayizakhamuzi zase-Mexico ngokwezimali, iminikelo ikhokhiswa intela ngaphansi kweSivumelwano Sase-USA/Mexico Sokugwema Ukukhokha Intela Ngokuphindwe Kabili, lapho kuhlangatshezwa yonke imibandela efanele. Sisebenzela ukwenzeni iminikelo ikhokhiswe intela kubabungazi bakwamanye amazwe, futhi sizokwazisa uma kukhona ukwaziswa okusha kwendawo yakho.
Ingabe ngingalishintsha inani lami lomnikelo ngemva kokuba ngikhethe ukuhlanganyela?
Yebo. Ungashintsha iphesenti lakho lokunikela noma ukhethe ukuphuma ekunikezeni nganoma yisiphi isikhathi kuDeshibhodi Yakho. Uzokwazi ukushintsha inani lomnikelo kuze kube yilapho i-Airbnb iqalise ukukhokhela ukubhukha, ngokuvamile usuku olulodwa ngemva kokuhamba kwesivakashi.
Yiziphi izinhlangano ezingenzi inzuzo ezizokwamukela umnikelo wami?
Umnikelo wakho uzosekela izinhlangano ezingenzi nzuzo ezixhumanisa abantu nezindlu zokuhlala zesikhashana lapho zihamba ngenxa yengxabano, inhlekelele, ukwelashwa, noma impumuzo. Lezi zinhlangano zingochwepheshe abaziwayo emhlabeni wonke emikhakheni yabo, kubalwa i- Mercy Corps kanye Umphakathi Wokuxhasa Umdlavuza. Funda kabanzi mayelana nokuthi iminikelo yakho ingasiza obani ku- airbnb.com/openhomes.
Umnikelo wami usiza kanjani abantu abaswele ukuba bathole izindawo zokuhlala?
Izigidi zabantu emhlabeni jikelele zishiya amakhaya azo ngenxa yezingxabano nezinhlekelele, noma ngenxa yokufuna usizo lwezempilo—futhi izindleko zingaba yisithiyo esikhulu sokufinyelela ezindlini zezimo eziphuthumayo. Inkundla Yezindlu Zezinhlekelele kakade isinikeze abantu abangaphezu kuka-50,000 izindawo zokuhlala zesikhashana zamahhala. Ngokunikela, usiza ababambisene nomphakathi wethu ukuba banikele ngezindawo zokuhlala zamahhala kulabo abazidinga kakhulu.
Ngingazithola kanjani izibuyekezo mayelana nomnikelo wami?
Uzokwazi ukubona inani olinikele kwiDeshibhodi yoMbungazi, ongakwazi ukuyifinyelela nganoma yisiphi isikhathi ngokuya ku- airbnb.com/hosting. Ngaphezu kwalokho, sizothumela ama-imeyili ngezikhathi ezithile akwazisa ngethonya lakho, kuhlanganise nombiko wonyaka weminikelo.
Ababungazi e-United States nakwamanye amazwe bangaqala ukunikela namhlanje. Sizama ukwenza iminikelo itholakale emazweni amaningi ngokuhamba kwesikhathi. Uma njengamanje uhluleka ukunikela ku-airbnb.com/openhomes/donations, sicela uphinde uhlole ngokuzayo.